नेकपामा सधैं बिबाद, प्रचण्डको गलत निर्णयको फल ! जनता समाजबादी प्रचण्डकालागि बेस्ट – Sanghiya Online
नेकपामा सधैं बिबाद, प्रचण्डको गलत निर्णयको फल ! जनता समाजबादी प्रचण्डकालागि बेस्ट
Posted on : October 29, 2020 - No Comment
तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता गर्ने सहमति जुटेको थियो । एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता हुने कुरा सुरुमा मानिसहरु अर्थात आफ्नै कार्यकर्ताहरुले पनि पत्याएनन् । नेकपाका अध्यक्षद्वयले कर्णाली प्रदेश कमिटी र त्यहाँको सरकारमा मुख्यमन्त्रीलाई बेग्लाबेग्लै सर्कुलर पठाएका छन्, जसले पार्टीभित्र द्वैधसत्ता सुरु भइसकेको प्रमाणित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले यही कात्तिक ५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेर गुलाबजंग शाहलाई मुख्य सचेतकमै पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्री शाहीसहितका नेताहरुलाई पत्र पठाएर आन्तरिक विवाद आफैं मिलाउन भनेका छन् । यो विवाद मिलाउन ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चार बुँदे सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका थिए भने प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले पनि प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै ओलीसँग कुनै सहमति नभएको जानकारी दिएका थिए । त्यति मात्र होइन यी दुइ अध्यक्ष बीच बेला बेलामा मुख फुलाउने र बोल चाल बन्द गरि १०-२० दिन सम्म कुरा कानी नै नगर्ने गरि बस्ने सम्म को क्रिया कलाप हुदै आएको छ । त्यस्तै, ओली–प्रचण्ड छलफलबारे बालुवाटार र खुमलटारबाट छुट्टा–छुट्टै प्रेसनोट जारी भएपछि बालुवाटारमा कुरा नमिलेको पुष्टि नै भयो ।
कोरोना काल मै जनतालाई राहत दिन नसक्ने सरकार र प्रधानमन्त्री ओली गलत समय मा राजपा र समाजबादी पार्टी फुटाउन बिधेयक नै ल्याएका थिए। स्रोत भन्छ – त्यसमा पनि प्रचण्ड ले बिरोध गरेका थिए र भनेका थिए अर्काको पार्टी फुटाउनु उचित होइन । पछि आफ्नै पार्टि फुटाउन का लागि र फुटेर जाने लाइ पार्टी खोल्न नेकपा एमाले नाम नदिने मनसाय ले ओलीले नेकपा एमाले नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको पनि पुष्टि भएको थियो। त्यो बेला पनि नेकपा फुट्छ नै भनेर धेरैले आकलन गरेका थिए। तर प्रचण्ड ले आफू तल परेर भएपनि त्यति बेला नेकपा जोगाउन सफल भएका थिए । यो घटनाले पार्टीभित्र केपी ओलीको निर्देशन लागू नहुने र प्रचण्डको निर्देशनअनुसार पार्टी चल्ने संकेत देखिएको छ । केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड तिनै हुन् जसले पार्टी एकता गर्नु अगाडी बिहान उठ्ने बितिकै मुख पनि नधोइकन एकले अर्कालाई गालि गर्दै आफ्ना दिनचर्या सुरु गर्दथे। पार्टी एकता भएको महिनौ सम्म पनि यो पार्टी फ़ुट्छ नै लागेको थियो। त्यसको कारण यो हो कि कहिले पार्टी जबज को कुरा निकाले त कहिले कार्यकर्ता मिलाउने कुरा। त्यो बेला देखि अहिले सम्म प्रचण्ड र ओली बिच बिबाद नभएको कुनै महिना छैन । एक चोटि त प्रचण्ड ले ओलीलाई संघिय संसद मै ओलीलाई निरङ्कुश देखि संकुचित सोच भएका व्यक्ति सम्म पनि भनेका थिए। अर्थात्, नेपाल समूहका सांसदहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको बुझाइकै कारण माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाही र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ठूलो राहत मिल्यो । जब कि, मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल समूहका सांसदहरु नै असन्तुष्ट थिए ।
यता कर्णालीमा मात्रै नभएर प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा पुग्नुसम्मको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि नेपाल समूहले साथ दिँदै आएका छन् । ‘एक व्यक्ति प्रधान जिम्मेवारी’ नारा लगाउँदै ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्दा नेता नेपाल समूह प्रचण्डसँग नजिक हुन पुगे । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको पार्टी विवाद समाधान सुझाव कार्यदलले प्रचण्डको जिम्मेवारीबारे प्रयोग गरेको मूलतः कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने शब्दप्रति नेता नेपालले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पछि, मुलतः शब्द हटाइयो । हरेकजसो निर्णय र गतिविधिमा प्रचण्ड–नेपाल एक ठाउँ उभिदै आएका छन् । २०७६ माघ १५–१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको समूहगत छलफलमा १५ मध्ये ओली तर्फका तीन जना मात्रै टोली नेता बन्नुमा प्रचण्ड–नेपाल सहकार्यले काम गरेको थियो । कतिसम्म भने ओलीले प्रचण्डसँग गरेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा पनि नेपाल निकट नेताहरु नै देखिएका थिए । गएको १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुको हस्ताक्षर देखि (असार १०–भदौ २६) स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रचण्ड–नेपाल मिलेका थिए । यसको असर, जिल्ला तहसम्मै पुगेको एक नेता बताउँछन् । तर, पार्टी निर्णय लिदा भने प्रचण्डले पनि नेपालसँग परामर्श समेत नलिई ओलीसँग सहमति गर्ने गरेको आरोप नेपाल समूहले लगाउँदै आएका छन् ।
नेकपालाई जोगाउन भन्दै ओलीसँग (पाँच वर्ष प्रधानमनत्री र एकताको महाधिवेशनसम्म ओली अध्यक्ष रहने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा चैतमा एकताको महाधिवेशन गर्नें) प्रचण्डले सहमति गरेपछि नेपाल समूहका स्थायी कमिटी नेताहरु आक्रोशित नै बनेका थिए । केही स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले नेता नेपाललाई अब प्रचण्डलाई यसरी एकोहोरो साथ दिन नसकिने निष्कर्ष सुनाएका थिए । तर, पनि प्रचण्डसँगै एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था बाध्यता भएको नेपालनिकट नेताहरु बताउँछन् । संवैधानिक–राजनैतिक नियुक्ति देखि पार्टी एकीकरणका क्रममा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिँदासमेत ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर नेपाल समूहलाई किनारामा धकेलेकाले अहिलेको परिस्थिति बनेको ती नेता बताउँछन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भएका पार्टी गतिविधि र पार्टी निर्णयहरुले नेपाल प्रचण्डसँग एकोहोरो प्रेममा परेको ओलीनिकट एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माधव नेपालजतिको सिनियर नेताले यस्तो एकोहोरो प्रेम देखाउनुले पार्टी राजनीतिमा समेत असर देखिएको छ ।’ माधव नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भने प्रेम नभएर सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जसले कसैसँग प्रेमको कुरा गर्दैछन् नि, उनीहरुले आफैंले गरेको तिस्कार पनि सम्झनु उचित हुन्छ ।’
कर्णालीको प्रकरणमा मात्रै नभएर सिंगै नेकपाको पार्टी राजनीतिमा सुधार भएन र अहिलेकै तरिकाले पार्टी चलिरहे यस्ता अनेक गठबन्धनहरु बनिरहने भुसाल बताउँछन् । अहिले कोरोनाको कहरलाई कारण देखाउँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना पर सारिएको छ । तर यही कार्तिक १५ देखि १७ सम्म बस्ने भनिएको बैठक मंसिर १५–१७ मा पुर्याउनुमा कोरोनामात्रै कारण नरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुमा बढेको अन्तरद्वन्द्व र सहमति उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धाले नेकपाको आन्तरिक जीवनलाई एकपछि अर्को धक्का लाग्दैछ। बिबादले के देखाउछ भने ओलीको एकलौटी सोच सुधारिएन भने नेकपाको विघटन निश्चित छ । भदौ २६ मा भएको सहमति विपरीत राजदुत र मन्त्री नियुक्ति, लगत्तै नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दल प्रकरण, रअ प्रमुख गोयलको सक्रियता र त्यसपछि पर्सा लगायतका घटनाले नेकपामा पूर्व समूहहरुको लडाई उत्कर्षतर्फ अघि बढेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको समस्या समाधान हुनुको साटो थप बल्झिरहेका बेला कार्तिक ६ गते पर्सा जिल्लामा नेकपाका कार्यकर्ताबीच झडप नै हुनपुग्यो । दुईं पक्षबीचको झडपमा परी घाइते भएका एक जिल्लास्तरीय नेताको निधन नै भयो । उक्त घटनामा पूर्व एमाले पक्षधर नेता कार्यकर्ताको संलग्नता रहेका स्थानीय नेकपाका नेता कार्यकर्ताले खुलेआम बताइरहेका छन् । पछिल्ला घट्नाक्रम र बढ्दो अन्तरसंघर्षले पार्टीमा पुनः कालो बादल मडारिन थालेको नेकपाकै नेताहरु स्वीकार गर्दछन् ।
किन जनता समाजबादी पार्टी प्रचण्डका लागि बेस्ट ?
नेपाली सबै जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो कांग्रेस र पूर्ब एमाले संघियता नस्विकार्ने पार्टी हुन् भने प्रचण्ड नेपालमा संबिधान सभाको चुनाब गराउने अठोटका साथ जान युद्धमा होमिएका थिए। यस अर्थमा प्रचण्ड संघियताबादी नेता हुन् । तर अहिले पनि कांग्रेसका सभापति ति नै शेर बहादुर देउवा हुन् जसले नेपालमा संबिधान सभाको चुनाब हुने न सक्ने ठोकुवा गरेका थिए र माओबादी संगको वार्ता भाडिएको थियो। कांग्रेस र पूर्ब एमाले संग पार्टी एकता गर्नु गोरु संग जुध्न जानु जस्तै हो र त्यसको फल प्रचण्डले पाई नै रहेका छन्।
नेपालमा अहिले बैकल्पिक पार्टीको बहश चलेको छ। जस अन्तर्गत अहिले संघिय स्विकार्ने संघियताका पिता भनेर उपेन्द्र यादवलाइ भन्ने गरिन्छ। उहा अध्यक्ष रहेको जनता समाजबादी पार्टीमा पूर्ब प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देखि मधेशी, जनजाति सहित अन्य सबै जातजातिको राम्रो उपस्थिति रहेको छ। स्वंग जनयुद्ध सफल बनाउने उहाको पछिको सेकेण्ड म्यान डा. भट्टराई समेत यहि पार्टिमा छन्। अत: प्रचण्डकालागि माओबादि पार्टी लिएर समाजबादी पार्टीमा आउदा नै ठिक हुने देखिन्छ।
नगर प्रमुख यादव, प्रशासकीय अधिकृत कायस्थद्धारा नगरपालिका भित्रका योजनाहरुको अनुगमन ।
रौतहटमा मेयरबाट एक उपमेयर पिडित, न्याय माग्न गुजराकी उपप्रमुख खातुन पुगिन सिडियो कार्यालय ।
संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने प्रदेश २ सरकारको बोल्ड निर्णय, यस्तो छ सरकारको कर्तुत
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि निकै ठूलो सघर्ष गरेका कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको निधन
ओलीसँग भित्रीरुपमा सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेको हो, यो त्यसै छाप्छ ? – सभापति देउवा